Shaqooyinka Gawaarida ee Dubai waa shirkadaha ugu fiican ee shaqo raadinta
Tilmaamaha Shaqooyinka Gawaarida ee Dubai
Ku soco wareysiga Dubai
Published by Shirkadda Dubai City at December 31, 2017
Shaqooyinka Shaqooyinka ee Dubai
Shaqooyinka ku jira fursadaha gaadiidka Dubai
Shaqooyinka Gawaarida ee Dubai, taasi micnaheedu waa markaad raadineyso fursad cusub. Shirkaddayada ayaa jeclaan lahayd inay kuu soo bandhigto shirkadaha ugu wanaagsan ee ka shaqeeya UAE. Sababtan awgeed, fiiri maqaalkayaga oo raadi sida aan kuu caawin karno. Mushaharka khibradda leh ee ganacsiga shaqooyinka Automotive.
Sidaa darteed haddii aad haysato sannado 3-25 waayo-aragnimo guul leh. Waxaad fursad u leedahay in laguugu dhigo musharax caalami ah oo ka baxsan wadankaada hooyo. Expat raadinta shaqo cusub ka Caribbean, US, Canada, Saudi Arabia xitaa Aasiya oo ay weheliyaan Malaysiya iyo xitaa dalal intaa ka sii badan oo u dhexeeya. Bishii Diseembar 2016, Shirkadda Dubai City shaqaalaysiintu waxay ka bilaabataa waddanka Imaaraadka Carabta Emirates (UAE). Marka, runtii waa u qalantaa in la dalbado Automotive Shaqooyinka Dubai.
Ganacsigan oo ay la galeen shirkadda Fortune 500 ee ku taal Dubai. Isku keena laba arrimood oo muhiim u ah Shaqaalaysiinta. Warshadaha gawaarida ayaa runtii beddelaya suuqa suuqa. Dabcanna, waxay u furan tahay fuliyayaasha nooc kasta ah. Iyo soo dhaweynta tartamayaasha caalamiga ah ee UK, US, Asia iyo Bariga Dhexe oo leh khibrad iib.
Iyadoo la fiirinayo mushaarka mushaharka leh. Nidaamyada gunnada abaalmarinta iyo finalka fursado horumarineed oo mustaqbalka ah. UAE gaar ahaan Dubai iyo Abu Dhabi kaliya maahan meel cajiib ah oo laga shaqeeyo. Laakiin xiiso iyo firfircoon meel si loogu noolaado nolol qoys iyo kids.
Automotive News Jobs iyo Baabuurta ciyaaraha
Iyadoo qayb ka ah geedi socodka qorista ee Bariga Dhexe. Our Shirkadda Dubai City waxay iskaashi la leeyihiin qaar ka mid ah UAE ugu weyn. Iyo maamulayaasha HR ee sida fiican loo ixtiraamo iyo shaqaaleysiinta shaqaaleysiinta. Waxa ugu horreeya ee ay tahay in la xasuusnaado waa in aynaan ahayn in aan iskaashi la samayno kuwa kale Shirkadaha Dubai. Laakiin waxaan hadda raadineynaa musharixiin cusub oo shaqooyin ka heli kara warshadaha baabuurta.
Waxaan hada shaqaaleysiinaynaa waayo, motor ganacsato khibrad u leh ganacsiga UAE. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay mustaqbalkiisa khibrad ahaan sida safka hore Tababaraha kooxda. Iyada oo leh khibrad farsamo farsamo. Waxaa lagu meelayn karaa UAE, Qatar ama Saudi Arabia. Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadiso mushahar aad u sarreysa waxaan kaa caawin karnaa gaar ahaan Dubai iyo Abu Dhabi. Yurub, Mareykanka, iyo Kanada ayaa soo maray Musharixiinta leh hibada ayaa aad loogu qiimeeyay wadamada GCC. Iyada oo laga eegay aaggaga oo dhan, waxaan isku dayeynaa inaan gacan ka geysano khibradaha musharixiinta. Iyo wuxuu murashaxiinta u siiyaa Maareeyayaasha HR dhammaan noocyada Gawaarida.
Maalmahan waa a suuq geyn tartan rasmi ah oo loogu talagalay musharax kasta. Si aan u bilowno waxaan shaqaaleyneynaa soo saaraha Shaqaalaha Dubai. Sidoo kale raadinta tartamayaasha tilmaamayaasha waxqabadka. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad khibrad u leedahay dhaqaalaha iyo caymiska waxaan kugu soo kordhin karnaa guddiga. Dabcan, annagaa raadinaya musharixiinta oo leh khibrad adeeg macmiil. Iyaga oo ay weheliso shaqaalaha buugga shaqooyinka injineernimada.
Ma aha in la xuso qorayaasha iyo kooxaha ganacsatada gudaha GCC. Horeba shaqaaleysiinta shaqaalaha India iyo Pakistan. Sidaa daraadeed, haddii aad raadineysid iskaashi la leh shirkadaha UAE. Waa inaad fiirisaa waxa shirkadan ay ku siin karaan. Tusaale ahaan, Porshe ee Dubai ayaa horey u shaqaaleysay shaqaalaha aan-ka ahayn ee Emirates ee maaraynta muhiimka ah ee ganacsigooda. Dhab ahaan, ma jiraan wax cudurdaar ah haddii aad raadineyso shaqooyin ee baabuurta baabuurta.
Wadamada GCC iyo hay'adda Hoggaanka Gaarka ah
Gaariga ganacsi si xawli ah ayuu ugu korayaa UAE. Isla mar ahaantaana, waad ka faa iidaysan kartaa oo waxaad ku kasban kartaa khibrada lagama maarmaanka ah. Daacadnimo in la dhigo meel xasiloon oo shirkad wanaagsan leh. Waxaad ubaahantahay inaad yeelato xirfado xoogan iyo aqoonta baabuurta. Xaaladaas, ganacsatada GCC iyo loo shaqeeyahaaga mustaqbalka ayaa ah keenaya kaliya musharixiinta ugu wanaagsan ganacsigooda.
Xaaladahaas oo kale, waa inaad bilowdaa inaad raadsato lammaane. Iyaga oo hogaaminaya wakaaladaha gawaarida Wadamada CCC. 2018 ilaa 2020 runtii waxay noqotaa sanadaha ugu waaweyn ee keenaya shirkadaha hogaaminaya miiska. Marka marka oo wax ka qabta qoraaga magaalada Dubai. Waa inaad ka heshaa adeegooda labadaba si gaar ah oo si fiican u jiheysan. Gaar ahaan shaqooyinka iibinta baabuurta.
Maareynta tiknoolajiyada caalamiga ah iyo madaxda shirkadaha macaamiisha. Sidaa awgeed, keenaan tiknoolajiyad cusub GCC ganacsiga mootada ee gobolka khaliijka. Waa inaad xor u tahay inaad la xiriirto shirkadaha sida gaarka ah loo qiimeeyo ee UAE. Resume Resume isla markiiba Ururada Dubai fursad cusub. Xitaa waad wici kartaa oo weydiin kartaa sida loo kala soocayo maamulaha HR. Iyada oo ay ugu wacan tahay baarista shaqadan ee shaqaalaysiinta hubaal waxaay kaa caawin kartaa inaad shaqo cusub hesho ganacsiga gudahiisa.
Xirfadaha GCC sida loo codsado shirkadaha ugu wanaagsan?
Fursadaha GCC waa kuwo aan la mid aheyn dalalka kale. Waxaad heli kartaa lacag aad u firfircoon bil kasta. Intaa waxaa dheer sii kordhaya suuqa oo sii kordhaya fursadahaaga, ee helitaanka booska maamulka sare. Iyadoo a Shirkadda baabuurta ee la aqoonsan karo sida Porsche ama Ferrari. Dhanka kale, gawaarida cusub ayaa diyaar u ah horumarinta.
Markasta oo aad la macaamilayso maareeyaha HR. Hal dhibic iskuday inaad soo jiidato maareeyaha shaqaalaysiinta intii aad kari karto. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo helitaanka xiriirka iyada oo la marayo geedi socodka, waa guul 50% ah. Isku day inaad dib u eegto cusbooneysiinta joogtada ah ee maamulayaasha HR. Iyo dabcan ka raadi xayeysiis shaqo oo cusub oo gaar ah gudaha UAE ururada baabuurta. Had iyo jeer sheeg in aad diyaar u tahay u guuri Imaaraadka haddii aad tahay musharaxa caalamiga ah.
Markasta ha noqoto mid firfircoon dooro kasta oo la bixiyo oo ka gudubta dhammaan habka wareysiga xittaa taleefanka. Hubi inaad si xirfad leh u shaqeyn doonto ku wac inaad ka hesho maamulaha kireystaha ama qoraaga. Isku day in aad waqti ka hor hesho oo aad ururiso macluumaad ka socda shabakadda shirkadda.
Caddaynta ugu badan ee qasabka ah ee warshadaha gawaarida soo kordhaya waa tirada boosaska shaqada. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay taariikh shaqo oo dheer. Iyo rabitaan xoog leh si aad u noqoto maamule sare iyo hogaamiyaha muhiimka ah ee warshadaha. Waa inaad horay u wado oo aad codsataa shirkadaha ugu fiican. Sida Audi, Mercedes, Maserati oo u dhaqaalee xirfadaada hore ilaa CEO Booska.
Sida ugufiican ee loo dalbado waa tilmaamaha hoos kuqoran. U gudub shirkadaheena oo u dir CV-gaaga cusboonaysiinta. Kadib sug in sixirku dhaco. Waxa kaliya ee kaa joojinaya si aad ugu gudubto meheraddaada heerka ugu sarreeya waa adiga!.
Codso Shaqooyinkaaga Cusub & Shaqooyinka Shaqooyinka ee Dubai
Liisaska shirkadaha ugu wanaagsan iyo qorayaasha si loo helo shaqo
Codso Awooda Shaqooyinka ee Dubai
Porsche Career ee Dubai
Codso halkan: https://www.porsche.com/middle-east/_dubai_/aboutporsche/jobs/
Dubai Porsche waa mid ka mid ah shirkadaha ugu fiican. Waxaad bilaabi kartaa xirfad lataliye xeel dheer, xiriiriyaha taleefanka ama goobta soo dhoweynta. Ama waxaad bilaabi kartaa booska sida La-taliyaha Sales. Shaqooyinka Porshe had iyo jeer waxay ku lug leeyihiin suuq geyn. Qof walba wuxuu ku riyoodaa gaarigaas isboorti. Iyadoo Porsche, waxaad abuuri kartaa xirfad cajiib ah.
Ganacsiga gawaarida ayaa abuuraya fursado Dubai ah. Iyo abuurista hoggaan gudaha gudaheeda suuqyada magaalada Dubai iyo Abu Dhabi. Porsche waxay leedahay koox maareyn waxqabadka maaraynta. Dhammaantood waxay diyaar u yihiin inay kaa caawiyaan meheraddaada. Shirkadda Porsche aad bay uga badan tahay kaliya soo saaraha baabuurta isboortiga gaarka loo leeyahay ee ku yaal United Arab Emirates.
Shirkadda waxay si joogto ah u dejisaa halbeegyo cusub warshadaha gawaarida. Shirkadan oo ay ku jiraan mid ka mid ah maamulayaasha iibka ugu fiican iyo shaqaalaha. Hadaad rabto inaad dhisto gawaari u gaar ah shirkadan adiga ayey kuu fiican tahay. Shirkadan had iyo jeer siiyaan shaqaalahooda wax aad u gaar ah. Sidaas awgeed waxay shaqaaleysiisay musharixiin cusub isla markaana u geyso jagooyinka maamulka.
Porsche waa shirkad si xawli ku dheehan tahay uga shaqeysa Dubai. Marka tan laga eego, waxay leeyihiin fikrado horumarineed oo xoog leh. Qof kasta oo shaqaalaha ah ayaa sameeya cilmi baarista qiimayaasha iyo falsafada. Oo waa inaad shaqo cusub ka hesha shirkaddan. Shaqooyinka Injineerka baabuurta ee UAE waa a fikrad cad oo loogu talogalay shaqaale cusub.
Waa maxay sababta Porsche ee magaalada Dubai?
Shirkadda Dubai Porshe waxay u oggolaataa shaqaale si aad u sii ahaato horumarka mihnadaha dhabta ah. Mabaadi'da ururka ugu weyni waa inay buuxiyaan baahiyo badan. Sidii ay ahayd shirkada la xusay waxay ku faanaan naftooda. Si kasta oo aad tahay booska aad tahay. Iyo dusha waxa ay dadka kale ku maamulaan Dubai.
Xaqiiqdii, Porsche waxaa ka go'an inuu noqdo shirkadda ugu dhaqsaha badan kobaca. Shirkadani waxay dib u qeexeysaa xaddidaadda HR si joogto ah 2018. Waxay sidoo kale dejiyeen shaqooyin cusub Expo 2020. Xaqiiqdii, shirkaddu waxay dejisay heerar cusub magaalada Dubai.
Porsche cusub Gawaarida si dhaqso ah ayey u noqdaan wax gaar ah. Porsche sidoo kale waxay rajaynaysaa natiijooyin aan caadi ahayn kooxda iibka. Waxay dejinayaan heerka iibka sareeya marka ay timaado faa iidada shirkadda. Sababtaas awgeed, shirkadda isku dayaya gaaraan wax ka badan heerka sare. Inaad shaqo ka hesho Porsche maanta iyo gudahaba mustaqbalku waa doorashada ugu fiican.
Xaaladahan oo kale, shirkaddu waxay si dhab ah ugu tiirsan tahay shaqaalaha iyo maamulayaasha. Guud ahaan, haddii aad u shaqeyso shirkadan. Aad u baahan tahay inaad had iyo jeer diyaar u ah in aan aado maylkaas dheer si loo gaaro bartilmaameedka iibka.
Codso Automotive Jobs ee Dubai - Porshe
Shirkadda 'Career Ferrari Corporation' Dubai
Codso halkan: http://corporate.ferrari.com/en/career
Shaqaale kasta oo Ferrari ah waa hantida ugu xoogan ganacsigooda. Duruufahaas oo kale, Ferrari wuxuu raadinayaa murashaxiinta awooda kor u qaad iibka iyo fursadaha faa iidada. Iyo maamulista shirkadan talyaaniga si sax ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku jirto maareynta maareynta waxaad ku gaari kartaa heer sare. Ferarri waa calaamad weyn oo qoyska ah marka aad la shaqeyneyso iyaga waxaad dareemeysaa sida koox. Ma aha in la sheego rajada fursadaha ganacsiga cusub. Waa inaad noqotaa qof leh xiriirin adag. Dhankaas, waa inaad la wadaageysaa khibradahaaga ganacsi ee gaariga. Maalin walbana wanaajiso xirfadaha oo ay weheliso shahaadooyinka natiijooyinka ugu wanaagsan.
Shirkadda waxay leedahay dareen xoogan oo ku saabsan qaab dhismeedka shaqaalaysiinta. Waqtigan xaadirka ah waxay jaceyl u hayaan taxadarka Sanadguurada 70. Markaa maadaama qodobbadaas aad la shaqeyso ay kaa dhigayaan kuwo raadinaya horumarka joogtada ah ee shaqadaada. Si aad u soo koobisto xirfadaha wanaagsan ee aad maalin walba sameyn karto. Ku guuleysii guulahaaga shaqo helitaanka ballaarinta Ferrari Shirkadda Dubai urur.
Ferrari waa meel fiican oo aad ku shaqeyn karto?
Qeybta ugu badan, Ferrari waa shirkad wanaagsan inay u shaqeyso Caalami. Maareynku wuu ogyahay qiimaha shaqaale kasta. Markaad tixraacdo qodobadan, habka ugu wanaagsan ee shaqsiyeed ayaa kaa caawin doona in lagugu dallaco booska maaraynta. Shirkadda kor u qaadista waxqabadka kooxda ee waxbarashada iyo iibka. Marka aad u shaqeyso. Heshiiska kaliya ee lagu gaadho waa kaliya marka shaqaaluhu dareemaan inay joogaan goobta saxda ah, waqtiga saxda ah. Iyada oo mushaaro si fiican loo bixiyay waqtigii loogu talagalay iyo jawiga saxda ah ee loogu talo galay mustaqbalka.
Shirkaddan Talyaani ah ayaa sidoo kale rumeysan taas tayada gawaaridu waa heshiiska ugu weyn ganacsiga. Tayada iyo Tirada gawaaridooda lama kala saari karo. Markaa maamul wanaagsan shirkadda dhexdeeda waxay ka caawisaa dadka inay shaqeeyaan ayna koraan xirfaddooda at Ferrari Corporation.
Taasina waa sababta ay shaqaaluhu u dhammaato. Deegaanka gudahiisa shirkadu waxay u fiicantahay dhammaan shaqaalaha. Waxyaabaha ugu muhiimsani waa had iyo jeer dhageysiga. Sidaa awgeed waxaanu kugula talinaynaa inaad bilaabi kartaa shirkadkan haddii aad ka timid South Africa.
Codso halkan: https://careers.fcagroup.com/our-brands/maserati-home/
Shirkad kale oo sumad leh waa inaad isku daydaa si aad shaqo u hesho waa Maserati. Shirkadda sahlan waxay leedahay sheeko Talyaani ah oo xoog leh. Qaybta ugu badan, waa astaan ​​caalami ah oo ku taal warshadaha baabuurta. Hadal ahaan, xarrago ayaa leh wax walba oo ku saabsan shirkadan. Cusub Ujeeddada qaab nololeed hodan ah. Waxa ugu horreeya ee la xasuusto inaad u baahan tahay waa inaad haysataa sannado adag oo khibrad iibsi ah. In laga shaqeeyo Maserati ee warshadaha gawaarida. Markaad shaqo ka codsato shirkadan. Maareeyayaasha HR ayaa doorbidaya musharixiinta leh khibrad ee ku jira calaamad raaxo leh.
Iibinta gaarka ah iyo xirfadaha gorgortanka. Iyo dhaxalka ammaanta leh ee ugu wanaagsan shirkad samaynta shirkaddu waxay ka taagan tahay suuqa. Si aad u dhigto qaab kale oo edeb leh oo wax ku ool ah iyo shirkaddan oo is bedbeddali karta. Doono kaa caawiya inaad shaqo hesho. Marka marka aad boos ka dalbatid Maserati. Waa inaad naftaada iibisaa adigoo si muuqata u muujinaya taas waad badin kartaa iibka iyo fursadaha faa iidada.
Markaa markaad la shaqeyneyso Maserati. Aad u baahan tahay inaad maarayn kartida xirfadaha cusub oo ku samee ganacsi cadaadis sarreeya, Shirkadda waxay ku shaqeysaa deegaan mug weyn sidaa darteed kan, baabuur shirkad reer yurub ah ayaa kugu habboon waqtigaaga. Codso boggooda mihnadeed iyo inaad wax badan ka ogaato ku saabsan xaalad shaqo oo iyaga leh.
Maserati wuxuu horseeday ganacsiga baabuurta
Miyaad bandhigeysaa oo muujin kartaa qiimaha gawaarida? Haddii jawaabtu tahay haa markaas Maserati waa a shirkad aad u fiican. Shirkadda waxay bilowday waqti dheer kahor waxayna ahayd 1st December 1914. Tan iyo markaas shirkadu waxay si dhakhso ah u noqotaa soo saaraha gaariga talyaaniga. Waxa ugu horreeya ee la xasuusto waa taariikh shirkadeed. Tusaale ahaan shirkad guuleysata oo ku timid aasaasihii Alfieri Maserati iyo walaalihiis.
Waqti dheeri ah xiisaha ay u qabaan warshadaha gawaarida iyo kartida ay u leeyihiin ganacsiga gawaarida ayaa gacan ka geystey dhismaha shirkadda qiimaha muhiimka ah. Maamulka sare ee shirkadda markasta waa dhahaan. Hal-abuurnimadaas iyo heerka sare ee ay la timid caqabaddan cusubi waxay dhistay shirkadan. Tan iyo 1914 ruuxa orodka wuxuu dhisayaa shirkad cajiib ah. Marka haddii aad jeceshahay inaad ka mid noqoto shirkadda halyeeyada ah. Aad u baahan tahay inaad diyaariso CV iyo wareysigaaga heerka ugu sareeya.
Bugatti ee Dubai
Codso halkan: https://www.bugatti.com/contact/
Gawaarida, Amakaagga, Gawaarida qaaliga ah. Sumadda Bugatti waxaa shaqaalaysiinaysa UAE. Bugatti waa astaan ​​wanaagsan. Ma waxaan u baahanahay inaan qof walba u soo bandhigno astaankan cajiibka ah ?. Maya, haba yaraatee, qiimaha gawaaridaas ayaa u dhexeeya 1Million USD. Iyo kaliya dadka ugu qanisan adduunka awoodaan inay iibsadaan Bugatti naftooda.
Shaqooyinka Mercedes-Benz Dubai
Codso halkan: https://mercedesbenzme.com/me/en/footer/about-us/careers/
Diiwaanka Taageerada Raadinta ee khibrada iibka ee guuleysta Guud ahaan, ayaa kaa caawin doona inaad shaqo hesho ee Mercedes Benz. Shirkadda shaqaalaynta maamulayaasha iibka ee Dubai. Waqtiga xaadirka ah Mercedes waxay leedahay fursado tafaariiqda adiga. Ujeeddada shirkaddu waxay u qaabaynaysaa meheraddaada sidaan hore weligeed ahaan. Marka sababtan awgeed sahaminta fursado shaqo.
Isku soo wada duuboo, iskuxiraha iyo shabakad iibiyaha ayaa noqon kara xulasho xikmad leh. Websaydhka Mercedes, waad ka dhex baari kartaa fursadaha shaqo ee hada jira. Duruufahaas oo kale, xitaa waad dhakhso u diri kartaa iyaga. Iyo sida lagu xusay bogga internetka waxaad si fudud ugu diri kartaa faahfaahintaada maamulayaasha HR Mercedes Benz.
Safka hore, shabakadooda shirkadaha. Kaliya waxaa ka mid ah saddex iyo toban shaqooyinka baabuurta. Halkee dabcan waad heli kartaa shaqo. Mercedes Benz waa shirkad aad u ballaaran oo had iyo goorba wey sii kordheysa. In ka badan suuqyada injineerada gawaarida gawaarida ee Bariga Dhexe. Dhammaan shaqaalaha cusub ee Mercedes si taxaddar leh ayaa loo xushay. Si ay u bilaabaan meeshi la yaab leh iyo iibka iyo iibinta gaarka ah.
Gobalka Bariga Dhexe ee Bariga Dhexe. Si fiican ayaa loo yaqaan haweenka caalamiga ah ee qurbaha. Sababta oo ah jawiga shaqada ee firfircoon ayaa keenaya shaqooyinka. Markaa, shirkaddu waxay soo jiidataa musharraxiinta maxalliga ah ee suuqa baabuurta ee Dubai. Iyo sidoo kale tiro badan oo qurbo-joog ah oo boos ka iibisanaya gudaha Mercedes ah. Si aad u dhigto qaab kale, waxaad bilaabi kartaa inaad u shaqeyso mid ka mid ah Mercedes Benz la-hawlgalayaal la xushay oo jooga gobolkaan. Ama waxaad ka dalban kartaa boos Xafiiska Madaxa.
Isla markaa, Mercedes-Benz ayaa ku siin doona. Amaan iyo tartan Fursadaha shaqo ee Imaaraadka Carabta. Iyada oo leh horumar shaqo mustaqbal oo xiiso leh. Xaqiiq ahaan, ugaadhsade kasta oo xirfad cusub sahaminta dhaqamada xiisaha leh ee Bariga Dhexe. Markay ku biirayaan shirkadan si wanaagsan loo qiimeeyay.
Xirfadda Aston Martin Dubai
Codso halkan: https://www.astonmartinlagonda.com/careers
Sidoo kale, waxaanu soo bandhignaa Aston Martin. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad xiiseyneyso inaad la shaqeyso madaxda sare. Kooxda Aston Martin waa mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan caalamka. Fursadaha gawaarida leh ee leh astaanta tiknoolajiyada ee ixtiraam leh sida Aston Martin. Waxay kaa caawineysaa inaad noqoto CEO si mustaqbalka ugu dhow.
Qodob kale oo muhiim ah haddii aad leedahay xirfado farshaxan. Waxaad ku biiri kartaa kooxda Aston Martin design. Shirkadu waxay abuurtaa noocyo cusub. Isku darka tiknoolajiyada. Sidaas waxaa jira a doorasho ballaaran oo loogu talagalay dadka cusub ee u cararaya Dubai. Hase yeeshee, waxaad leedahay khibrad injineernimo. Waxaad raadsan kartaa farsamooyin xirfadeed oo farsamo iyo fursado farsamo oo xirfadaysan oo kooxeed.
In aan ka idhaahdo wax ku saabsan xirfadiisa fulinta Aston Martin. Waad noqon kartaa maamule oo leh mid ka mid ah laamooda ganacsiyada. In kasta oo ay taasi run noqon karto la shaqeynta gawaaridan maalin walba waa farxad run ah.
Iskusoo wada duuboo shaqo gaar ah deegaanka Imaaraadka Carabta. Aston Marin Dubai oo deg deg ah ayaa hubaal ah inay kugu abaal marinayso kobcin mihnadeed. Websaydhka, waad awoodaa helitaanka shaqooyinka banaan ee loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee Pakistan.
Shaqooyinka Audi Audi
Codso halkan: https://www.audi.com/en/career.html
Waxaa sidoo kale jira dhowr banaan oo leh Audi ee Bariga Dhexe. Taas bedelkeeda, Audi ee Dubai waxaa loo asaasay inuu yahay shirkad buuxda ee AUDI AG ee 2005. Goobta shaqada ee Audi waa mid aad u wanaagsan. Dhinaca xun ee Dubai. Waxaa jira noocyo badan oo raaxo leh. Sidaas marka aad bilaabid la shaqeynta urur. Waxaad haysan doontaa xafiiska iibinta gobolka oo eegaya horumarkaaga. Laakiin si aad u muujiso dhinaca wanaagsan ee Audi. Waxaad ku saleysnaan doontaa bartamaha ganacsiga baabuurta Dubai. Waxa kale oo laguu hormarin karaa iyadoo la kordhinayo xirfadahaaga. Iyo weliba, waxaad noqon kartaa masuul. Soodhaweynta Audi ee suuqyada Audi ee Bariga Dhexe.
Shirkaddu waxay ku shaqeysaa oo ay isku xirtaa dhammaan xilalka maamulayaasha iibka. Tababarida suuq-geynta cusub maamullada iyo waxqabadyada iibka kadib ee Imaaraadka Carabta. Qodob kale oo muhiim ah waxaad ka shaqayn kartaa ganacsatada madaxa banaan ee gobolka ama Sucuudiga. Sidaas awgeed saldhigga waayo-aragnimadaada shaqadaadu waxay noqon doontaa mid deggan.
Ujeedada laga caawinayo. Guud ahaan kooxda Audi waxay ka shaqeeyaan gudaha shirkadda sida Maaliyadda. Shirkaddu waxay u adeegtaa sidoo kale qaybta VW. Marka, hal shay, waxay noqon doontaa wax badan si dhakhso leh si loo xalliyo arrimahayaga.
Falanqaynta ugu dambaysa, Audi oo hadda raadinaya xubno cusub oo shaqaale ah. Sida lagu xusay haddaad rabto inaad la kulanto asxaab cusub. Waxaa intaa dheer, waxaad jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso hawlaha adag ee ku jira koox yar oo Audi ah. Waa in aad tixgeli codsigaaga shaqo ee boosaska soo socda shabakadooda.
La xiriir: https://dubai.bentleymotors.com/meia/en/contact
Bentley Dubai, oo ah wakiilka rasmiga ah ee Bentley Motors ee Bariga Dhexe. Marka, Bentley ee Dubai waa laga yaabaa doorashada wanaagsan ee fursadaha shaqo ee Bariga Dhexe.
Shirkaddani waxay leedahay hoggaamiyeyaal khibrad wanaagsan leh. Dhammaantood waxay ka shaqeynayaan sidii ay u soo uruurin lahaayeen waaya-aragnimada ugu wanaagsan macaamiishooda. Marka, fiiri boggooda internetka iskuna day inay ka dhaadhiciyaan guddiga maamulkooda inay ku siiyaan jago fiican.
Shirkadani sidoo kale waa sumcad wanaagsan oo ku taal Dubai. Websaydhkooda, waxaad la yeelan kartaa xiriir wanaagsan waxaadna sidoo kale arki doontaa waxay runtii ka sameynayaan xagga ganacsiga. Kala shaqeynta shirkadahan gawaarida ee magaalada Dubai waji kala duwan oo ka jira gobolka Khaliijka waxay ku siin doontaa dariiqa madaxa mustaqbalkaagaNooc ka mid ah iibka sare ama waaxda injineerinka.
La xiriir: https://www.acura.com/contact-us/
Acura waa nooc ka mid ah ganacsiyada gawaarida isboortiga, wax badan oo u jiheysan ciyaaraha. Laakiin waa inaad sidoo kale u dirtaa macluumaad degdeg ah oo ku saabsan xaaladaada shaqo. Waxaad email u diri kartaa kooxda Acura ama waxaad la hadli kartaa sheeko nool.
Xaqiiqdii waa inaad eegtaa qeybta xiriirkooda websaydhka. Shirkadeena, si kastaba ha noqotee, ku dar degelkan websaydhka shirkadaha Shirkadaha Gawaarida leh leh Waxaan rajeyneynaa inaad ka heli doonto qiimo wanaagsan taas.
Iyada oo ah shirkad si wanaagsan saldhigeedu yahay gudaha Magaalada Dubai. Summadaani waa ganacsi caalami ah oo cadcad oo caan ah. Waxaa intaa dheer, ururkani wuxuu dhab ahaantii shaqaaleysiiyaa dadka adduunka oo dhan. Marka meel kasta oo aad ka timid dhab ahaan waad ka heli kartaa shaqo iyaga. Sidaan wada ognahay 80% ee xoog ayaa ka socota India iyo Pakistan. Tani waa sababta wax dhib ah maleh haddii aad runtii isku deyeyso inaad ka dhoofto Dubai. Weli fursad ayaad heleysaa oo fadlan ka codso websaydhkooda. Marka taasi waxay ku siin doontaa Haygood farshaxan cusub oo ku taal Dubai.
Astaantan ayaa runtii ah astaan ​​gaar ah oo inta badan xoogsatada aysan awoodin inay shaqada la helaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad khibrad fiican u leedahay markaa xaqiiqdii waxaad dooran doontaa doorashada waad awoodi doontaa inaad shaqo la hesho. Shirkadahaan runtii waxay shaqaaleysiiyaan maamuleyaal kanaal maamuleyaal xirfadleyaal ah iyo Agaasimayaal.
Codso halkan: https://www.bmwgroup.com/en/careers.html
Kadib dhamaan BMW Group rasmi ah. Si loo tilmaamo inay yihiin soo dejiyeyaasha ugu sarreeya ee Magaalada Dubai. Shirkadda fadhigeedu yahay magaalada Sharjah iyo Imaaraatka Waqooyiga. Xaaladahaas oo kale AGMC BMW. Guud ahaan marka laga hadlayo, shirkadda BMW waxay gashay sannad-guuradeeda 40th ee 2016. Safka hore, BMW AGMC ilaa hada. Shirkaddu waxay abuurtaa wax weyn guulaha iyo guulaha Dubai. Dhanka kale, shirkadu waxay maamushaa ganacsi afartii sano ee la soo dhaafay.
Iyadoo tan maskaxda ku haysa, BMW waxay leedahay ganacsi in ka badan sanado 40. BMW AGMC ayaa gaarsiiyey gawaarida premium shaqooyinka bannaan ee ka jira UAE sidoo kale dadka Hindida ah. Shaqooyinka shirkadaha iibka ee BMW waxay abuurayaan alaabadooda iyo adeegyadooda mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa. Isla mar ahaantaana, macaamiisha waxay jecelyihiin gawaarida gaarka ah.
Baabuurta BMW Group waa shirkad aad u fiican. Ururku wuxuu aasaasay koox iibka ah 1976. Dhab ahaantii, BMW AGMC tan iyo markaas waxay noqotay mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan shaqooyinka suuqa suuqyada ee boosaska maaliyadeed. Shirkadani waxay shati u siisay shirkadda BMW Group ee Bariga Dhexe. Dhinaca kale, 2016, AGMC si buuxda loo aqoonsan yahay. Oo waxay magacooda u helayaan sida ugu wanaagsan ee loo iibiyo caalamka.
Alfa Romeo Bariga Dhexe
La xiriir: http://www.alfaromeo-me.com/contact
Shirkadan waxay leedahay laamo badan Bariga Dhexe. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa Baxrayn, Kuweyd, Qadar iyo Lubnaan. Marka, Waxaa jira fursado badan oo kuu banaan adiga oo shaqo-doone ah si aad u hesho jihada saxda ah.
Alfa Romeo, waa calaamad wanaagsan. Gaadiidka aadka u wanaagsan iyo kuwa caanka ahba horay ayaa loo iibiyaa kormeeraha shirkadan caanka ah. Waxaad halkan ku heli kartaa Dubai Alfa Romeo. Iyo rajo-gelinta shirkadan ayaa noqon doonta shaqo-bixiyahaaga xiga.
Marka haddii aad khibrad u leedahay waxaad fursad u heli doontaa inaad la shaqeyso shirkado sidan oo kale ah. Waxaa jira xiriir kahadlaya korka sare fadlan fadlan kahadal kadibna waxay kaa sii qaadi doonaan qaybta shaqada. Waxaan rajeyneynaa inaad ka heli doontaa shaqo cajiib ah dalka Mareykanka shirkaddan.
Toyota Cars ee UAE
La xiriir: http://www.toyota.ae/site/enquiry/
Gawaarida Toyota ee Dubai waxaa iska leh shirkadda Al-Futtaim Motors. Waa koox Huge ah iyo bixinta jagooyin badan oo banaan suuqa shaqada ee Bariga Dhexe. Marka, ururkani wuxuu bixiyaa gawaadhi tayo sare leh oo Toyota ah. Inaad la xiriirto maareeyayaasha ku habboon waa inaysan dhibaato noqon haddii aad qibrad leedahay.
Ururka ugu wanaagsan ee la yaqaan. Dib u eegista internetka ayaa ah jacaylka kaliya ee shirkadan. Sidaa darteed waxaad fursad u heli doontaa noocyada ugu sarreeya sida tan. Guud ahaan, shirkadaha baabuurta ayaa had iyo goor siinaya mushahar qiimo leh shaqaalahooda. Weliba waxaad mar kasta ka filan kartaa dhinaca kale tababarka wanaagsan iyo in si fiican loo dhigo tababarkiisa.
La xiriir: https://cadillac.libertyautos.com/site/contact-us/
Shirkadda Cadilac uma baahna in la baro qof kale. Haddii aad raadineyso shaqooyin cusub oo Gawaarida shaqada ah sida maareeye ama lataliye iibka. Shirkadani waxay noqon kartaa ficilka aad doorato. Sababtoo ah waxaa jira sheeko dheer oo ka dambeysa nooca Cadilac ee Mareykanka iyo Yurub.
Waqtigan xaadirka ah shirkaddu ma laha wax boosas bannaan oo lagu xayeysiiyay websaydhkooda. Si kastaba ha noqotee, waa inaad fiirisaa oo aad xitaa la sheekaysataa kooxda wax iibisa. Waqti qaar su'aal fudud oo deg deg ah waxay horseedaa shaqo dhammaystiran.
La xiriir: https://uae.sellanycar.com/contact
Shirkad kasta oo gawaarida ah ayaa ka shaqeeya caalamka. Shirkadani way ka badan tahay kaliya iibinta bogga iibka baabuurta. Waxay ku siinayaan qiimeeynta baabuurta bilaash ah. Macaamiisha ayaa awood u leh inay isbarbardhigaan siciradooda oo ay arkaan waxa dadka kale ay leeyihiin. Ma jiraan qaybta shaqada iyo shaqooyinka laakiin waa inay shaqeeyaan markaad isticmaashay codsi deg deg ah.
Codso halkan: https://www.autotrustuae.com/career
Shirkadani waxay qayb ka tahay AW Rostamani Automotive Group. Si kastaba ha noqotee, waa mid leh qeybta shaqadooda iyo shaqooyinkooda. Ka shaqeynta shirkaddan hubaal waxay xasilin doontaa waxqabadkaaga warshadaha gawaarida. Gaar ahaan haddii aan ka hadlayno suuqa Dubai iyo Abu Dhabi.
La xiriir: https://www.copartmea.com/
Kusoo noqoshada Bariga Dhexe waxay leedahay wax ka badan gawaarida 200 iibinta maalin kasta. Hadana guud ahaan, shirkadani waa mid wanaagsan Meel aad fiirin karto shaqo.
Shirkadda Copart waa shirkadda ugu wayn ee xayaysiinta internetka ee milkiilayaasha gaadiidka. Goobtan waxaa dib u iibineysa baabuurta 2 million sannad kasta tan iyo bilowgii. Ilaa hadda, in ka badan xarumaha 170 ee adduunka oo dhan waxay ku dhejinayaan xayeeysiin ku qoran website-kooda.
Shirkadaha shirkadu waxay ku shaqeeyaan 2012. Copart waxay soo saartay khayraadkeeda Bariga Dhexe. Shirkan ayaa rajeynaya horumarinta wadamada Khaliijka.
Kooxda Shirkadda Al Shamali
Codso halkan: http://www.alshamaligroup.com/careers.php
Shirkad kale oo wanaagsan oo bilaabi doonta shaqo waxay noqon doontaa Al Shamali Auto Parts Group. Shirkadan oo bixisa fursado shaqo oo cajiib ah Bangiyada Ganacsiga ee Dubai, Dhismaha, Baniyas Square, Deira, Dubai. Marka, hadaad saldhig ka dhigayso UAE. Xaqiiqdii waa inaad si shaqsi ah u eegtaa ama aad kula xiriirtaa maamulayaashooda khadka tooska ah.
Shirkadan ayaa ah mid si weyn macaamiil u ah diiradda. Had iyo jeer hore ugu dhaqaaq adiga oo kusocda qaab sax ah oo eega loogu talagalay kharashyada xamaasadda leh, shaqaalaha tamarta leh, ciyaartoy kooxda dabacsan iyada oo si kalgacal leh u gaarsiinaysa macaamiishooda adeeg heer sare macaamiishooda magaalada Dubai. Dhanka kale, shirkadani waxay leedahay hanaan shaqaaleyn aad u fudud. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad dib ugu soo celiso boosta.
Kooxda AW Rostamani
Iyagu waa shirkad kale oo si fiican looga yaqaan Imaaraadka Carabta inay ka shaqeeyaan. AW Rostamani Group waa hubaal inay mudan tahay tixgelin. Shirkadu maahan shirkad iib ah laakiin waxay soo saaraan qaybo otomaatig ah. Marka, haddii aad khibrad injineer ku leedahay ganacsiga baabuurta. Ka codso xiriirinta ay bixiso shirkaddayada. Iyo hwaxaad shaqo ka heli doontaa shirkada riyada sida AW Rostamani Group.
La xiriir: https://www.rmamotors.com/contact-us/
RMA Motors iibiya gawaarida heerka heerka sare ah. Shirkaddu waxay awood u leedahay inay iibsato oo ku iibiso gawaarida suuqa UAE. Intaa waxaa sii dheer, Maalgelinta Gawaarida iyo iibinta iibka baabuurta. Marka, guud ahaan marka laga hadlayo, waxay u fiicantahay in la siiyo wicitaan. Waxay raadinayaan farsamoyaqaanno badan oo ka shaqeeya kooxdooda. Marka, haddii aad taqaanid sida loo maareeyo elektiroonigga iyo mashiinka baaburka heer sare runtii waa inaad tixgelisaa boos injineer wanaagsan.
Hadda waxaanu qoreynaa shaqooyinka Automotive ee Dubai!
Gaadiidka Automobile ee UAE - Shaqooyinka ee Porsche iyo Ferrari UAE
UAE ee Automotive Jobs ee Dubai
Ma rabtaa inaad hesho a Shaqada Dubai in kasta oo ay taasi run tahay waan ku caawin karnaa. Sifudud shaqo cusub ka bilow UAE ama Kuweyt!. Hubaal waa inaad sidoo kale fiirisaa shirkadaha shaqaalaynta. Ka hor intaadan tagin, fiiri Shirkadda Dubai no.1 iyo goobta shaqada ee loogu talagalay in loo qoro UAE. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Resume Resume oo ah magaalada ugu sarreysa ee aduunka! - Shirkadda Dubai City.